सचिन परियारको बुवा तेजेन्द्रले फेरि के गरे? युवती रूँ’दै आइन् मिडियामा १७ लाख चलखेल! – चितवन मिडिया
केही दिन अगाडी मात्रै उनको जेठी श्रीमति काठमाडौ आएर आफ्ना छोरा छोरी भेटेर फर्किएकी हुन्। पाछिल्लो समयका एकदमै भा’ई’रल र च’र्चित बाल गा’यकको रुपमा प’रि’चित नाम हो सचिन परियार जो गुल्मीका हुन। उनी यति धेरै भा’ई’रल भएकी जहाँ गएनी उनका शु’भ’चिन्तकहरुले उनको पछि लागेर फो’टो खि’च्न पनि पछि परेनन।
उनै भा’इरल स’चिनलाई कतिले आफ्नो भाई समेत बनाईसकेका छन। तर उनलाई भे’टेर हैन आफ्नो आ’त्माले। आफ्ना जन्म दिने छोरा छोरि लाई भेटेर सचिन को आमा अहिले घर फर्केकी छिन्। एक पटक छोरा छोरि लाई भेट्ने धोको थियो सरिता को , बाग्लुङ्ग देखि एक पटक भए पनि आफ्ना सन्तान लाई भेट्छु भनि आएकी सरिता आफ्ना सन्तान लाई देखे पछि अंगालो हालेर धेरै रोईन , सचिन पनि आफ्नी आमालाई देखेर धेरै माया गरे। मेरी आमा राम्री हुनुहुन्छ , बुबाले अर्को बिहे गरेर मेरी आमा ले धेरै दु’ख दिनु भयो भनि गुनासो गरेका थिए।
सचिन लाई हु’र्काईन ब`ढाईन ठुलो बनाईन , तेजे`न्द्र ले दोस्रो बि’बाह गरे पछि सन्तान संग अ’लग बस्नु पर्यो। दुई बर्ष सम्म श्रीमान को मा’या र स’न्तान पाउछु कि भनि दुई बर्ष सम्म कु’रिन दुवै केहि नपाए पछि सचिन कि आमा सरिता ले दोस्रो बि’बाह गरेकी हुन्।
पहिलो श्रीमान बाट माया नपाएर दो’स्रो बि’बाह गरेकी सरिता लाई अहिले पनि भ’गवान ले ठ’गे , दोस्रो बिबाह बाट पनि राम्रो हुन् सकेन। यति बेला सचिन भाइरल भईरहदा सचिन को क’माई खान आमा अहिले मिडिया मा भा’इरल भएको भन्ने हरुको लागि यस भिडियो बाट पनि सचिन लाई आमा ले पहिले देखि नै प्रयास गरेको देख्न सकिन्छ। के होत एथार्थ भिडियोमा हेर्नहोसbright nepal।